लसारटन बनाम लिसिनोप्रिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, समाचार भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार समाचार, कल्याण स्वास्थ्य घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> लसारटन बनाम लिसिनोप्रिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
लसारटन बनाम लिसिनोप्रिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
यदि तपाईं एक १०3 मिलियन अमेरिकीसँग हुनुहुन्छ भने उच्च रक्तचाप तपाईको डाक्टरले तपाईको रक्तचाप कम गर्न औषधी दिन सुरु गरेको हुनसक्छ। लोसार्टन र लिसिनोप्रिल दुबै जेनेरिक औषधि हो जुन उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ ( उच्च रक्तचाप )। Losartan एक एंजियोटेंसिन II रिसेप्टर ब्लकर (एआरबी) हो र लिसिनोप्रिल एक एंजियोटेंसिन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम इनहिबिटर (ACE अवरोधकर्ता) हो।
दुबै ड्रग्स शरीरको अ on्गमा काम गर्दछ रेनिन-एंजियोटन्सिन प्रणाली तर बिभिन्न तरिकाहरूमा। रेनिन-एंजियोटेंसिन प्रणालीमा, ACE अवरोधकर्ताहरूले एंजियोटेंसिन II भनिने पदार्थलाई रोक्दछन्। Angiotensin II रक्त वाहिका संकुचन गर्दछ र रक्तचाप बढाउँदछ, त्यसैले एंजियोटेन्सिन II को उत्पादन अवरुद्ध गरेर, रक्तचाप कम छ। एआरबीले एन्जियोटेंसिन २ लाई रिसेप्टर्समा बाँध्नबाट रोक्दछ, जसले रक्तचाप कम गर्दछ।
लोसार्टन र लिसिनोप्रिल बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
लोसार्टन एक एआरबी हो, ब्रान्डको नाम र ट्याब्लेट फारममा उपलब्ध हुन्छ, कोजार (वा हाइजार जब हाइड्रोक्लोरोथिजाइडसँग मिलनमा, आमतौरमा एचसीटीजेडको रूपमा संक्षिप्त एक डायरेटिक)। सामान्य डोज २ 25 मिलीग्रामदेखि १०० मिलिग्राम दैनिक हुन्छ।
Lisinopril एक ACE अवरोधकर्ता हो ब्रान्ड नामहरू प्रिन्भिल वा Zestril (वा HSTZ को साथ संयोजनमा जब Zestoretic) द्वारा तालिका फारममा उपलब्ध छ। यो मौखिक समाधानको रूपमा पनि उपलब्ध छ क्युब्रेलिस। सामान्य खुराक दैनिक mg मिलीग्राम देखि mg० मिलीग्राम सम्म।
सम्बन्धित: लसार्टन विवरणहरू Lisinopril विवरण
लोसार्टन र लिसिनोप्रिल बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Angiotensin रिसेप्टर अवरोधक (एआरबी) ACE अवरोधक
ब्रान्ड नाम के हो? Cozaar
Hyzaar (लोसार्टन / HCTZ) प्रिनिभिल
क्रेब्लिस (मौखिक समाधान)
जस्टोरेटिक (लिसिनोप्रिल / एचसीटीजेड)
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेट (एक्लै र HCTZ को साथ संयोजनमा) ट्याब्लेट (एक्लै र HCTZ को साथ संयोजनमा)
मानक खुराक के हो? २ to देखि १०० मिलिग्राम दैनिक दैनिक to देखि mg० मिलीग्राम
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क, बच्चाहरू (संकेतमा निर्भर गर्दै) वयस्क, बच्चाहरू (संकेतमा निर्भर गर्दै)
Lisinopril मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Lisinopril मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
के म zyrtec र benadryl सँगै लिन सक्छु?
लसार्टन बनाम लिसिनोप्रिलद्वारा सर्तहरू
Losartan उच्च रक्तचाप (HTN), वा उच्च रक्तचाप को उपचार को लागी संकेत गरीएको छ। यो उच्च रक्तचाप र बायाँ निलयको उच्च रक्तचापको साथ बिरामीहरूमा स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न प्रयोग गरिन्छ, र यो निश्चित बिरामीहरूमा मधुमेह नेफ्रोपथीको उपचारको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
लिजिनोप्रिल एचटीएनको उपचारको लागि संकेत गरिएको छ, कन्जेस्टिव हार्ट फेल्योरमा सहयोगी उपचारका रूपमा, र हृदयघात भए पछि बाँच्नको लागि सुधार गर्न।
दुबै औषधिहरूको अफ-लेबल प्रयोगहरू पनि छन्, तल उल्लेखित।
सर्त लोसारटन लिसिनोप्रिल
उच्च रक्तचापको उपचार (HTN) हो हो
HTN र बायाँ निलय हाइपरट्रॉफी (LVH) को साथ बिरामीहरूमा स्ट्रोकको जोखिम कम गर्नुहोस्। हो अफ-लेबल
टाइप २ मधुमेह भएका बिरामीहरूमा एचआईटीएनको ईतिहास र एलिभेटेड सीरम क्रिएटिनिन र प्रोटिन्युरियाको साथ मधुमेह नेफ्रोपथीको उपचार। हो अफ-लेबल
डायरेटिक्स र डिजिटलिसिसको लागि पर्याप्त प्रतिक्रिया नदिने बिरामीहरूमा मुटुको असफलताको व्यवस्थापनमा सहायक चिकित्सा अफ-लेबल हो
अस्तित्व सुधार गर्न तीव्र मायोकार्डियल इन्फेक्शन (MI) को २ 24 घण्टा भित्र hemodynamically स्थिर बिरामीहरूको उपचार अफ-लेबल हो
कम ईजेक्शन अंशको साथ हृदय विफलता अफ-लेबल अफ-लेबल
महाधमनी फैलाव दरलाई कम गर्न मार्फान सिन्ड्रोम अफ-लेबल अफ-लेबल
गैर- ST- उन्नयन तीव्र कोरोनरी सिन्ड्रोमको साथ बिरामीहरूको व्यवस्थापन अफ-लेबल अफ-लेबल
गुर्दा प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताहरू अफ-लेबल अफ लेबल (पोस्ट ट्रान्सप्लान्ट एरिथ्रोसाइटोसिस भएका बिरामीहरूमा)
प्रोटीन्यूरिक क्रोनिक किडनी रोगका बिरामीहरू अफ लेबल (मधुमेह बिरामीहरूमा) अफ-लेबल (मधुमेह वा नन्डियाबेटिक बिरामीहरूमा)
स्थिर कोरोनरी धमनी रोग अफ-लेबल अफ-लेबल
के लसारटान वा लिसिनोप्रिल अधिक प्रभावकारी छ?
AR१ अध्ययनहरूको समीक्षामा एआरबीहरू (लोसार्टन सहित) लाई ACE अवरोधकर्ताहरू (लिजिनोप्रिल सहित) सँग दाँजेर, दुबै कोटीको ड्रग्स भएको पाए समान दीर्घकालीन प्रभावहरू रक्तचाप मा। लेखकहरूले यो पनि निष्कर्ष निकाले कि दुबै ड्रग्सको मृत्यु, हृदय घटनाहरू, प्रमुख प्रतिकूल घटनाहरू, जीवनको गुणस्तर, र जोखिम कारकहरू जस्तै लिपिड स्तर, मधुमेह मेलिटस, र बाँया निलय द्रव्यमान र प्रकार्यमा समान प्रभाव पार्दछ।
सानोमा अध्ययन मृगौला रोग, लोसार्टन र लिजिनोप्रिलका बिरामीहरूको मृगौला समारोह र रक्तचापमा यस्तै प्रभावहरू थिए।
तपाईंको लागि सब भन्दा प्रभावकारी औषधि तपाईको डाक्टरले तोक्नु पर्छ, जसले तपाईको मेडिकल अवस्था (हरू), इतिहास, र तपाईले लिनु भएका अन्य औषधीहरूको पूर्ण तस्वीर हेर्न सक्दछन्।
कवरेज र लगार्टन बनाम लिसिनोप्रिलको लागत तुलना
दुबै लोसार्टन र लिसिनोप्रिल बीमा र मेडिकेयर पार्ट डी द्वारा जेनेरिक फर्ममा समाहित छन्। ब्रान्ड नाम संस्करणहरू एक उच्च कोपेमा कभर हुन सक्छ। लोसार्टन १०० मिलीग्रामको tablets० ट्याब्लेटहरूको लागि बाहिरको जेब लागत $ २-- $ from० सम्म हुन सक्दछ, र मेडिकेयर पार्ट डी कोपे लगभग $ ०- $ १। हो। एक एकलकेयर कूपनको साथ, मूल्य दायरा $ 9- $ १ is प्रतिस्पर्धी फार्मेसीमा निर्भर गर्दछ। १० मिलीग्राम लिसिनोप्रिलको tablets० ट्याब्लेटहरूको लागि बाहिरको जेब लागत about १$ को हो, र मेडिकेयर पार्ट डी कोपे about ०- $ is को बारेमा छ। तपाईं एकलकेयर डिस्काउंट कार्ड वा कूपनको प्रयोग गरेर लिसिनोप्रिलमा पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
मानक खुराक #, ०, १०० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू #, ०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ १ $ 0- $ 7
एकलकेयर लागत $ २-- $ .० $ 9- $ 26
लोसार्टन बनाम लिसिनोप्रिलको सामान्य साइड इफेक्टहरू
लोसार्टनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टमा खान्की, चक्कर आना, माथिल्लो श्वासप्रणाली संक्रमण, थकान, र पखाला समावेश छ।
लिसीनोप्रिलको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टमा खांसी, चक्कर आउने, टाउको दुख्ने, थकान, र पखाला समावेश छ।
अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ। साइड इफेक्टको पूर्ण सूचीको लागि स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
खोकी हो १-2-२9% हो -.--69%%
चक्कर हो %% हो .4.%%
संक्रमण हो %% हो २.१%
नाकको भीड हो दुई% हो ०..4%
ढाड दुख्नु हो दुई% हैन -
थकान हो >%% हो २.%%
पखाला हो >%% हो २.7%
मतली हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो दुई%
टाउको दुखाई हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो 7.7%
स्रोत: डेलीमेड (लोसार्टन) , डेलीमेड (लिसिनोप्रिल)
लोसार्ट बनाम लिसिनोप्रिलको ड्रग अन्तर्क्रिया
लोसार्टन वा लिसिनोप्रिल पोटेशियम वा पोटासियम बढाउने अन्य औषधीहरूको साथ प्रयोग गर्नु हुँदैन (जस्तै पोटेशियम-स्पेयरिंग डाइरेटिक्स), हाइपरक्लेमियाको जोखिमको कारण। थप रूपमा, तपाईंको खानामा पोटासियमको बारेमा डाक्टरलाई सोध्नुहोस् र यदि तपाईंले पोटासियम युक्त खाद्य पदार्थ र नुन विकल्पहरू जोगिनु पर्छ भने पोटेशियम हुन्छ।
NSAIDs (नन्स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स) लोसार्टन वा लिसिनोप्रिलको साथ संयोजनको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनकि यसले मिर्गौलामा चोट वा मृगौला असफल हुन सक्छ।
लोसार्टन वा लिसिनोप्रिल अर्को एसीई अवरोधक, एआरबी, वा टेक्टर्ना (एलिसकिरेन) को साथ संयोजनको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन किनभने यो संयोजनले कम रक्तचाप, उच्च पोटाशियम, बेहोशी, मिर्गौला बिग्रने, वा मिर्गौलामा असफलताको जोखिम बढाउँदछ।
औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास लोसारटन लिसिनोप्रिल
पोटासियम इलेक्ट्रोलाइट हो हो
इन्स्पेरा (eplerenone) पोटेशियम-स्पेयरिंग डायरेटिक्स हो हो
मोट्रिन, एडविल (आईबुप्रोफेन)
Relafen (nabumetone) NSAIDs हो हो
अल्टेस (रामिप्रिल) ACE अवरोधकर्ताहरू हो हो
हमला गर्दै (कैन्डार्टन)
बेनीकार (ओल्मेसारन) एआरबीहरू हो हो
Tekturna (aliskiren) रेनिन अवरोधक हो हो
लोसार्टन र लिसिनोप्रिलको चेतावनी
लोसार्टन र लिसिनोप्रिल दुबै बक्सिed चेतावनीहरूको साथ आएका छन् जुन एफडीएले आवश्यक पर्ने सबैभन्दा कडा चेतावनी हो। रेनिन-एंजियोटेंसिन प्रणालीमा काम गर्ने ड्रग्स (जस्तै लोसार्टन र लिसिनोप्रिल) ले भ्रूणमा गम्भीर चोट / जन्म दोष वा मृत्यु निम्त्याउन सक्छ र एक पटक गर्भावस्था स्थापना भएपछि यसलाई बन्द गर्नुपर्दछ।
कसरी तपाइँको रक्तचाप तल ल्याउन
अन्य चेतावनीहरू जुन लोसार्टन र लिसिनोप्रिलमा लागु हुन्छन्:
डिहाइड्रेटेड वा डायरेटिक्स लिने बिरामीहरूले कम रक्तचाप (हाइपोटपोन) विकास गर्न सक्दछन्।
तीव्र गुर्दे विफलता सहित रेनल समारोहमा परिवर्तनहरू देखा पर्न सक्छ। जोखिम किडनी समस्या वा गम्भीर हृदय असफलता भएका बिरामीहरूमा बढी हुन्छ। यी बिरामीहरू एसीई अवरोधकर्ता वा एआरबीको लागि उम्मेदवार हुन सक्दैनन्। यदि यी औषधीहरू मध्ये एक सुरू गरिएको छ भने, मृगौला समारोह अनुगमन गरिनु पर्छ।
पोटेशियम स्तरहरू अनुगमन गरिनु पर्छ।
लिसिनोप्रिलसँग अतिरिक्त चेतावनीहरू छन्:
त्यहाँ anaphylactic प्रतिक्रिया (गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया) को सम्भावना हुन्छ, सहित अनुहारको एन्जियोएडेमा (सूजन), हातहरू, ओठ, जिब्रो, ग्लोटिस, र / वा स्वरयन्त्र। यो प्रतिक्रिया उपचारको समयमा कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। Laryngeal edema संग सम्बन्धित Angioedema घातक हुन सक्छ। जहाँ जिब्रो, ग्लोटिस वा स्वरयन्त्रको संलग्नता छ, जहाँ हावामा बाधा उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ, आपतकालीन उपचार आवश्यक छ। यदि यी प्रतिक्रियाहरू देखा पर्‍यो भने लिजिनोप्रिल बन्द गर्नुपर्दछ।
कलेजो समस्याको सानो जोखिम छ; कलेजो ईन्जाइमहरूलाई अनुगमन गरिनु पर्छ।
ब्रेडीकिनिन भन्ने पदार्थको विच्छेदनको कारण, सुख्खा खोकी हुन सक्छ। एक पटक औषधि बन्द भएपछि खोकी बाहिर जानु पर्छ।
लोसार्टन र लिसिनोप्रिलको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
लोसारटन भनेको के हो?
लोसारटन एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लकर हो जसले रक्तचाप कम गर्न मद्दत गर्दछ। यो माथि वर्णन गरिएको विभिन्न अन्य सर्तहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Lisinopril एक ACE अवरोधक हो कि रक्तचाप कम गर्न मद्दत गर्दछ। माथि उल्लिखित अन्य चिकित्सा सर्तहरूको लागि पनि यो प्रयोग गरीन्छ।
के लोसार्टन बनाम लिसिनोप्रिल उस्तै हो?
यद्यपि दुबै औषधिहरू रेनिन-एंजियोटेंसिन प्रणालीमा काम गर्दछन्, तिनीहरू प्रणालीको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दछन्, तर दुबै औषधीहरूले रक्तचाप कम गर्दछन् र अन्य मुटु वा मिर्गौला अवस्थाका लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूसँग खुराक, चेताउनी र मूल्यमा अन्य भिन्नताहरू पनि छन्।
अन्य सामान्य एसीई अवरोधकर्ताहरू (जस्तै लिसिनोप्रिल) जसमा तपाईंले सुन्नुभएको हुन सक्छ लोटेंसिन (बेनाजेप्रिल), वासोटेक (इनालाप्रिल), एककुप्रिल (क्विनाप्रिल), र अल्टेस (रेमिप्रिल)।
अन्य एआरबीहरू (लोसार्टन जस्ता) तपाईंले सुन्नु भएको हुन सक्छ एडर्बी (एजिल्सार्टन - जेनेरिक उपलब्ध छैन), एटाकांड (क्यान्डेरस्टन), अवप्रो (इरबर्स्टन), माइकार्डिस (टेलमिसार्टन), डिओभान (वाल्सार्टन), र बेनीकार (ओल्मेसारन)।
के लोस्ार्टन वा लिसीनोप्रिल राम्रो छ?
अध्ययनहरूले एसारबीहरू जस्तै लोसार्टन र एसीई अवरोधकर्ताहरू जस्तै लिजिनोप्रिलले समान प्रभावहरू देखाएका छन्। यी औषधिहरू मध्ये कुनै एक तपाईंको लागि सही छ कि छैन हेर्नको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
के म गर्भवती हुँदा लोसार्टन वा लिसिनोप्रिल प्रयोग गर्न सक्छु?
लोसारटन वा लिसीनोप्रिल गर्भवती हुँदा कहिल्यै लिनु हुँदैन। दुबै औषधि विकासशील भ्रूणका लागि धेरै खतरनाक हुन्छन् र भ्रुणमा गम्भीर जन्म दोष वा मृत्युसमेत हुन सक्छ। यदि तपाईं पहिले नै लोसार्टन वा लिसिनोप्रिल लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, तुरुन्तै आफ्नो डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
म रक्सीको साथ लोसार्टन वा लिसिनोप्रिल प्रयोग गर्न सक्छु?
लोसार्टन वा लिसिनोप्रिल लिदा रक्सी पिउँदा चक्कर बढ्न सक्छ, वा तपाईंको रक्तचाप वा अन्य चिकित्सा अवस्था (हरू) लाई असर गर्न सक्छ। लोसार्टन वा लिसिनोप्रिलको साथ रक्सीको प्रयोगको बारेमा तपाइँको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म लाईसिनोप्रिल र लोसार्टन सँगै लैजाऊ?
होईन। केही रक्तचाप औषधिहरू संयोजनमा प्रयोग हुन्छन् (जस्तै लसार्टन वा लिसिनोप्रिल एक मूत्रवर्धकको संयोजनमा), लिजिनोप्रिल र लोसार्टन सँगसँगै लिनु हुँदैन। त्यसो गर्नाले कम रक्तचाप, उच्च पोटाशियम र मृगौलामा चोटपटकको जोखिम बढ्छ जुन धेरै गम्भीर वा सम्भावित घातक पनि हुन सक्छ।
के लोसार्टन एसीई अवरोधकर्ता हो वा बीटा ब्लकर हो?
लोसारटन एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लकर हो। यो ACE अवरोधकर्ता वा बीटा ब्लकर होईन।
के लसारटानले लिजिनोप्रिल भन्दा कम साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँछ?
दुबै औषधिहरूको समान साइड इफेक्टहरू छन्, यद्यपि लिस्निप्रिलले सुख्खा खान्की हुने सम्भावना बढी हुन्छ र एन्जियोएडेमा (गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया) को खतरा हुन्छ। साइड इफेक्टको पूर्ण सूचीको लागि तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
ट्रामाडोल बनाम ऑक्सीकोडोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
खाना को १ घण्टा पछि रगतमा ग्लुकोज स्तर
इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लागी सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक पूरक के हो?
कसरी बीमा कटौती योग्य र पकेट को काम बाहिर छ
तपाइँ कसरी राती घाँटी दुखाई पाउनुहुन्छ?
म फ्लू संग के खाने?